Windows အသစ်တင်ပြီးရင်လုပ်ဆောင်သင့်သည့် Back Up and Restore Point ~ နေမင်းမောင် ( နည်းပညာ )
Home » Tips And Tricks » Windows အသစ်တင်ပြီးရင်လုပ်ဆောင်သင့်သည့် Back Up and Restore Point
By နေမင်းမောင်4:42 AM45 comments
ကျွန်တော်ဒီနေ့တော့ဘာ Backup Tool ကိုမှမသုံးပဲ Windows မှာပါတဲ့ Function ကနေပြီးတော့ Backup and restore လုပ်နည်းလေးကို ပြန်ပြီးမျှဝေပေးသွားပါမယ်..။ ကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာကို Windows အသစ် တင်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့ Backup ဆိုတာကို မဖြစ်မနေ လုပ်ထားသင့်ပါတယ်..။ တကယ်လို့ ကွန်ပျူတာမှာအကြောင်း တစ်စုံတစ်ရာကြောင့် System Restore ပြန်လုပ်ရမဲ့ အခြေအနေမျိုး ရောက်လာခဲ့မယ်ဆိုရင် Backup လုပ်ခဲ့တဲ့ အကျိုးကျေးဇူးကို ခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ်..။ ကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာကို Windows အသစ်တင်ပြီးလို့လိုအပ်တဲ့ Application တွေအားလုံးကို Install လုပ်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့ Backup system ကိုစပြီး လုပ်ဆောင်သင့်ပါတယ်..။ ဒါမှ Windows ဟာသုံးရတာကြာလို့လေးလာလို့ Windows အသစ်ပြန်မတင်ချင်လို့ Repairs လုပ်ချင်တာပဲဖြစ် အခြေအနေ တစ်ခုကြောင့် Windows ကိုပြန်ပြီး Restore လုပ်၇မဲ့အခြေအနေမျိုးနဲ့ကြုံလာခဲ့ရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်၊
Backup လုပ်ခဲ့တဲ့ဖိုင်လေးကိုပြန်ခေါ်ပြီးတော့ Windows ကိုမိမိတို့ Backup လုပ်ခဲ့တဲ့အခြေအနေ ကနေပြန်ပြီး အသုံးပြုလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်..။ ကျွန်တော် Windows Restore လုပ်နည်းလေးကိုလည်း အောက်မှာပုံလေးနဲ့ရှင်းပြပေးထားပါတယ်..။
1.အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ Windows ကို Backup လုပ်ဖို့အတွက် အောက်မှာပြထားတဲ့ ပုံလေးတွေအတိုင်းအဆင့်ဆင့် သွားလိုက်ပါ..။
အပေါ်ကပုံအတိုင်း မြင်ရပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ Back up File တွေကို သိမ်းဆည်းထားချင်တဲ့ Partation ကိုရွေးချယ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်.။ တကယ်လို့ Windows ထဲက Drive တွေကိုမရွေးပဲ Usb Drive ထဲမှာ Backup File တွေကို သိမ်းဆည်းထားချင်တယ် ဆိုရင်တော့ Usb Drive ကိုမိမိရဲ့ ကွန်ပျူတာမှာ တပ်လိုက်ပါ.. ။ မိမိတို့ရွေးချင်တဲ့ Drive ကိုရွေးပြီး Next ကိုပေးလိုက်ပါ..။
အပေါ်ကပုံအတိုင်း ပေါ်လာပြီဆိုရင်တော့ Let Windows Choose ( recommended ) နဲ့ Let me choose နှစ်ခုရွေးပေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်..။ Let Windows Choose ( recommended ) ကိုရွေးပေးမယ်ဆိုရင်တော့ Windows မှာရှိတဲ့ Data တွေ ၊ Destop ပေါ်မှာရှိတဲ့အရာတွေ Default Windows Folder တွေအကုန်လုံးကို BackUp လုပ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်..။ သူကတော့မိမိတို့ Backup လုပ်ချင်တဲ့ File တွေကိုရွေးချယ်လို့ရမှာမဟုတ်ပဲ Auto Back Up လုပ်ပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်... Let me choose ကိုရွေးချယ်မယ်ဆိုရင်တော့ BackUp လုပ်ချင်တဲ့ File တွေကိုရွေးချယ်လို့ရသလိုကို ထပ်ပေါင်း ချင်တဲ့ File တွေကိုလဲထပ်ပေါင်းထည့်ပြီး BackUp လုပ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်..။ ကျွန်တော်ကတော့ မိမိစိတ်ကြိုက် ထပ်ထည့်လို့ရအောင် Let me choose ကိုရွေးပေးလိုက်ပါတယ်..။ မိမိတို့ကြိုက်တာကို ရွေးချယ်လို့ရပါတယ်...
အောက်ကပုံအတိုင်းပေါ်လာပြီဆိုရင်တော့ Change schedule ကိုနှိပ်ပြီး Windows Back Up ကိုတစ်ပါတ်ကို ဘယ်နေ့တွေမှာ ဘယ်အချိန်တွေမှာ လုပ်မှာလဲဆိုတာ ရွေးချယ်ပေးရပါတယ်...
အပေါ်ကပုံအတိုင်း Save setting and backup ကိုနှိပ်လိုက်ပြီဆိုရင်တော့မိမိတို့ရွေးချယ်ခဲ့တဲ့ Drive ထဲမှာ Back Up ကိုစပြီးလုပ်ဆောင်နေပြီဖြစ်ပါတယ်..။ မိမိတို့ရွေးချယ်ခဲ့တဲ့ Drive ထဲမှာ Back Up လုပ်ပြီးပြီဆိုရင် တော့ Back Up လုပ်ဆောင်ခြင်း ပြီးဆုံးသွားပါပြီ..။
ကျွန်တော်အပေါ်မှာရှင်းပြခဲ့ပြီးသလိုပါပဲ Back Up လုပ်ခြင်းအပိုင်း ပြီးဆုံးသွားပြီဆိုရင် မိမိတို့ရဲ့လက်ရှိသုံးစွဲနေတဲ့ Windows ကလေးနေလို့ပဲဖြစ် ၊ Virus ကြောင့် Windows မှာ Error တစ်ခုခုဖြစ်နေရင်ပဲဖြစ်ဖြစ် ၊ Windows ကိုပြန်ပြီး Restore လုပ်ချင်သူများအတွက် ကျွန်တော်အောက်မှာ Windows Restore လုပ်နည်းကို ပုံလေးတွေနဲ့ရှင်းပြပေးထားပါတယ်..
အရင်ဆုံးမိမိတို့ရဲ့ စက်ထဲကို Windows ခွေကိုထည့်လိုက်ပါ.. ပြီးရင် Windows တင်တဲ့ အတိုင်းဆက်ပြီး လုပ်သွားလိုက်ပါ..။ Windows ကို Install လုပ်ရမဲ့နေရာရောက်ရင် ဆက်ပြီးလုပ်ရမယ့် အဆင်လေးတွေကိုတော့ အောက်မှာ ပုံလေးတွေနဲ့ရှင်းပြပေးထားပါတယ်...
အပေါ်ကပုံအတိုင်း မြင်ရပြီဆိုရင်တော့ သူက Recovery လုပ်မှာလား Restore လုပ်မှာလား ဆိုပြီး ရွေးခိုင်း ပါလိမ့်မယ်.. ကျွန်တော်တို့က Restore လုပ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် Restore your computer ကိုရွေးပေးလိုက်ပါ..
အပေါ်ကပုံမှာပြထားတဲ့ အတိုင်း မိမိတို့ Back Up လုပ်ထားတဲ့ Drive ပေါ်လာပြီဆိုရင် Next ကိုနှိပ်လိုက်ပါ.. ကျွန်တော်က Drive H ထဲမှာ Back Up လုပ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် ( H ) ဆိုပြီးပေါ်နေတာဖြစ်ပါတယ်..။
အပေါ်ကပုံအတိုင်းမိမိရဲ့ ကွန်ပျူတာကို Restart ပေးလိုက်ပြီးလို့ Windows ပြန်တက်လာပြီဆိုရင်တော့ Windows ကို Back Up လုပ်ခဲ့တုန်းကအခြေအနေအတိုင်းပြန်ပြီး အသုံးပြုလို့ရသွားပါပြီ..။
Anonymous July 9, 2011 at 10:12 PM
အကိုေ၇ စက်ကသူများဆီ က ၀ယ်တာဘာမှ မသိခဲ့ဘူး အခုလဲ windows7 အာတီမိတ် တင်လိုက်တာ အသံကမလာတောဘူး
၀ယ်တဲ့ သူကိုမေးတောလည်းမပြောတတ်ဘူးဆိုတောဒုက္ခေ၇ာက်နေတယ် ဘယ်လိုလုပ်၇မလဲ သိချင်ပါတယ် ပြောပြပေးပါ ကျေဇူးပြုပြီးတော သူငယ်ချင်းတွေမေး၇တာလဲ အားနာနေမိတယ်distop ပါ စက်က
Anonymous July 22, 2011 at 2:31 PM
John August 22, 2011 at 4:12 PM
Anonymous September 11, 2011 at 12:31 AM
Anonymous September 12, 2011 at 3:22 AM
ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ် တို့ ကို
ကျေးဇူးအများကြီးတင်တယ် အစ်ကိုရေ..နောက်လဲ windows 7နဲ့ပက်သက်တဲ့အကြောင်းလေးတွေများများရေးပေးပါအုန်း.....
sawmyintsoeaung September 30, 2011 at 11:53 PM
ညီလေးနေမင်းမောင်ရေအစ်ကိုတစ်ခုလောက်မေးချင်လို့ပါ။အစ်ကို့စက်မှာဝင်းဒိုးအသစ်တင်ပြီး adobeflash player ပြန်အင်စတောလုပ်လို့မရတော့လို့ပါ။အစ်ကို့စက်က dell inspiron N4010 laptop window7 home premiUM 64 bit ပါ။ကျေးဇူးပြု၍ပြန်လည်ဖြေကြားပေးပါ။အားတော့နာတယ်ညီလေးရေ။ဒါပေမယ့်အစ်ကိုလည်းရှေးဆက်လုပ်မတတ်တော့လို့ညီလေးဆီအကူအညီတောင်းတာပါ။ညီလေးစိတ်၏ချမ်းသာခြင်းကိုယ်၏ကျန်းမာခြင်းပြည့်စုံပါစေ။
imurdream October 30, 2011 at 11:21 AM
အကိုရေ ကျတော်ပြန်လည်မျှဝေပေးဖို့ ယူသွားတယ်နော်
Thiha (Agri;) November 27, 2011 at 5:31 PM
ကိုနေမင်းမောင်လို အများအကျိုးဆောင်နိုင်တဲ့သူတွေများများပေါ်ပေါက်လာပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးပါတယ်။
ကိုနေမင်းမောင်ကို ကျွန်တော် မချီးကျူးပဲမနေနိုင်ပါဘူး။
ကိုနေမင်းမောင် ကျန်းမာပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလျှက်......
Anonymous November 28, 2011 at 9:14 AM
many many THANK !
Unknown January 4, 2012 at 9:59 PM
Soe Tay January 5, 2012 at 11:32 AM
KMK January 7, 2012 at 2:57 PM
KMK January 7, 2012 at 2:58 PM
Anonymous January 25, 2012 at 11:07 PM
ရွေညာသား March 24, 2012 at 12:44 AM
kaung March 29, 2012 at 9:43 AM
ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ ကျွန်တော်မသိတာလေးတွေကို သိခွင့်ရတဲ့ အတွက် ပါ
Paing Thu April 4, 2012 at 4:26 PM
waiyand April 7, 2012 at 11:50 PM
Anonymous April 20, 2012 at 1:53 PM
Anonymous April 27, 2012 at 9:37 PM
ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ ကျွန်တော်မသိတာလေးတွေကို သိခွင့်ရတဲ့ အတွက်
Anonymous June 2, 2012 at 1:01 AM
Anonymous June 3, 2012 at 5:08 PM
Thank , Brother ..
Anonymous July 12, 2012 at 1:24 AM
Unknown July 15, 2012 at 7:33 PM
Anonymous July 15, 2012 at 10:01 PM
Alfred Ngala Yoyin Thin Tuep August 2, 2012 at 2:01 PM
အစ်ကိုကြီကမပြောရင်တောင်မှ ကျွန်တော်ကတော့ millions of thanks ပါပဲကွာ.......... God bless you in all you do
မောင်းသိန်ဖေမြင့် September 28, 2012 at 11:01 AM
အစ်ကို အစ်ကိုဆိုဒ်ဟာ ညီးတိုမြန်မာလူမိူးတွေးအတွက်အရန်တန်ဖိုးရှိပါတယ် အစ်ကို အစ်ကိုညီနေမင်းဆိုဒ်ထဲးဝင်းပြီရင်းတချားဆိုဒ်တွေးကြည်ရတာ ဟာတာတာကြီးဖြစ်ဖြစ်နေတယ် ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုကိုယ်သင်းပြပေးနေတဲ့ဆရားတွေးကြီးပါပဲး ဆရားသမားအာလုံးကိုညီးမောင်းသိန်ဖေမြင့်ကအစဉ်းအမြဲလေစာနေလျှက်ပါအစ်ကို ညီးအီမေလ်က de1915@hotmail.com ပါအစ်ကိုနေမင်းမောင်
soe September 30, 2012 at 12:03 PM
kogyi naing August 11, 2013 at 5:05 PM
thanksalot bro; ခုလိုအွန်လိုင်းပေါ်ကနေ အခမဲ့ပညာတွေဝေမျှပေးနေတဲ့အကို၇ဲ့စိတ်ဓါတ်ကိုအရမ်းလေးစားမိပါတယ် နောက်နောင်ဒီလိုပဲ ဝေမျှနိုင်ပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းလျက်
way phyoe paing love love love April 21, 2014 at 8:12 PM
kozaw oo June 22, 2014 at 12:14 AM
သိုင်းကျူးပါဗျာ ဆရာဖြစ်ထိုက်ပါတယ်.... တချိူ့ က အထက်တန်းပြ ဆရာတွေဗျ သူတို့တတ်သလိုရှင်းပြကြတယ် .. ကျွန်တော်တို့က သူငယ်တန်း (လုံးဝ)အဆင်မပြေဘူး
zawmoe moe August 12, 2014 at 10:20 PM
ကျနော်က ပညာလိုက်ရှာနေတာ ဆရာပြောသလိုပဲ စာအုပ်နဲ့ရေမှတ်ပြီးလိုက်လုပ်ကြည်မယ် မတတ်သေးပေးမဲ့လည်းနည်း2တော.သဘောပေါက်တယ် သင်ပေးနဲ့သူမရှိဘူးဆိုတော့ဒီလိုပဲလေ့လာရမှာပေါ့ ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် တတ်ခြင်းတယ်ဆရာတို့လိုမျိး
ျRanger September 29, 2014 at 3:33 AM
ကွန်ပြူတာလုံးဝ အခြေခံမရှိတဲ့ဒို့အတွက်တော့ ခင်ဗျားလို ပုံလေးတွေနဲ့ရှင်းပြတော့ တော်တော်လေးအဆင်ပြေပါတယ်၊စေတနာအကျိူးပေးပါလိမ့်မယ်၊ကျေးဇူးအထူးပါ။
kk yy March 12, 2016 at 12:10 PM
iCare Data Recovery 4.5.0 Software + Registration ...
Video To GIF v3.4.0.0 + SERIAL [FULL]
Windows အသစ်တင်ပြီးရင်လုပ်ဆောင်သင့်သည့် Back Up an...
MediaFire မှ Download လုပ်နည်း
JetVedio version 8.0
Photoshop မှာTxet လေးကို Animation နဲ့သုံး ကြည...
Universe Wallpapers Set
SpeedConnectInternetAccelerator8.0 +keygen & crack...
Man-U , Chalse နှင့် Arsenal Crazy များအတွက်
ကွန်ပျူတာမှကွန်ယက်ဆီသို့ ( E-Book )
IDM 6.06 Build 8 Final + Keygen
Mac OSX Lion ကို Windows7မှာသုံးချင်သူများအတွက်
Window7ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာ မိမိတို့နာမည်လေးပြောင်ြး...
သီချင်းတွေကိုအလွယ်တကူ Convert လုပ်ချင်သူများအတွက်
Hide Folders v3.7.4.651 +crack
InternetTV 1.5.2 Portable
Driver Compaq PresarioCQ42-105TU for Win...
How to Update Kaspersky 2011 Offline
PhotoInstrument 5.0.0.500 + Portable
iPhone တစ်လုံးကို UnLock / Upgrade ပြုလုပ်နည်း ( E...
Windows7Themes 90
Folder Marker Pro v3.2.0 Portable
Skype v5.3.0.120 Portable
Advanced System Care Pro v4.0.1
Microsof Office 2010 + Activator ( Update Link...
Funny Pictures around the World.
TuneUp Utilities 2011 v10.0.4200.101,Portable
Something Fishy Theme
Nero Showtime 2.0.0.44+serial key
FaceBook Wall မှတဆင့်Malware တွေမ၀င်နိုင်အောင် ...
G-Mail ရဲ့အသုံးဝင်တဲ့Feature လေးတွေကိုသုံး ကြည...
Office Password Recovery Magic v6.1.1.263+serial
Firefox4မှာ Save and Quit Function သုံးချင် ...
IDM 6.06 Beta Build7+ crack-serials
Kaspersky AntiVirus & Internet Security 2012 ( 12....
Firefox Speed ကို FirefoxBooster လေး သုံး ပြီးမြှင...
Window ပေါ်မှအလွယ်တကူ Format ချနည်း
avast! Internet Security v6.0.1125 + License Keys
BEYOND A+ ( E-Book )
Kapersky 2011 Installation and Key ထည့်နည်း ( ...
ESET Anti Virus and Smart Security5Beta
G-Mail အကောင့်တွေအခိုးမခံ ရအောင်သတိထားဖို့လိုပြီ.....
Connection မကောင်းတဲ့အချိန် G-Mail စစ်ချင် သူများအ...
3D Japan Screensaver
Folder Lock v6.6.0 + Serials